Kitra-Analamanga : Hifandona amin’ny ekipany teo aloha ry Velontsiory
Hitopy any amin’ireo mpilalaon’ny Ajesaia teo aloha (Velontsiory, Ando, Jean Bà, Doula ary Sitraka) nifindra ao amin’ny AS Adema ny masonny mpitia baolina kitra anio, etsy Mahamasina.
Isan’ireo mpilalao niara-nilalao tamin’izy ireo tamin’izany nefa tsy maintsy hihaona aminy ry Setra sy Voavy Kassa, izay mbola manana ny maha izy azy eo amin’ny fomba filalao.
Tafiditra amin’ny andro faharoa ho an’ny fiadiana ny ho tompondakan’Analamanga eo amin’ny sokajy diviziona voalohany io lalao io. Mila mitady fandresena ny Ajesaia raha mbola te hiverina hitana ny laharana voalohany eo amin’ny filaharana vonjimaika eo amin’ity fifaninanana ity.
Ny lalaon’ny Tana Formation FC sy ny AS Saint Michel, no hanokatra ny fihaonana eo amin’ny Adema sy Ajesaia, izay hisoratra eo amin’ny tantaran’ny baolina kitra amin’ity taom-pilalaovana ity. Ny Assm tamin’ny andro voalohany dia nahavita nanao ady sahala2 no ho 2 tamin’ny fihaonan’izy ireo tamin’ny Cosfa. Ny Tana Formation FC kosa dia ratsy fiditra ihany tamin’ny andro voalohany tamin’ny nandresen’ny Ajesaia azy ireo tamin’ny alalan’ny isa 2 no ho 1. Mila miady mafy izy ireo amin’ity andro faharoa ity raha te hanatanteraka ny nofinofiny tamin’ny fiandohan’ny taom-pilalaovana niarahany tamin’ny mpanohana azy.